Abakhiqizi be-Huawei ONU | I-China I-Huawei ONU Factory & Abahlinzeki
IHuawei xPON ONT 1GE + 3FE + WIFI HG8546M
I-EchoLife HG8546M, i-optical network terminal (ONT), iyisango lasekhaya elisezingeni eliphezulu kusisombululo seHuawei FTTH. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-xPON, ukufinyelela kwe-ultra-broadband kunikeziwe kubasebenzisi basekhaya nabakwaSOHO. IH8546M inikezela ngamachweba we-1 * POTS, 1 * GE + 3FE port-adapting Ethernet port, kanye ne-2 * port ye-Wi-Fi. I-H8546M ifaka amandla wokudlulisa ukusebenza okuphezulu ukuqinisekisa isipiliyoni esihle kakhulu ngezinsizakalo zevidiyo zeVoIP, Internet ne-HD. Ngakho-ke, i-H8546M inikezela ngesixazululo esiphelele se-terminal kanye namakhono asekela imisebenzi esekwe ekusetshenzisweni kwe-FTTH.
I-Huawei GPON ONT 1GE + 3FE + CATV + Izimbiza + WIFI EG8143A5
IHuawei EG8143A5 iyi-routing-type Optical Network Terminal (ONT) - okuyingxenye ebalulekile yesixazululo sokufinyelela se-Huawei konke-okusebenzisa ubuchwepheshe be-Gigabit-Passive Optical Network (GPON) ukusebenzisa i-ultra-broadband ukufinyelela kwabasebenzisi. Ngokusebenza okuphezulu kokudlulisa ukuqinisekisa ukusebenza komsebenzisi okungaguquguquki kwezwi, idatha, kanye nezinsizakalo zevidiyo ze-High Definition (HD), namakhono wokusekelwa kwezinsizakalo okugxilwe esikhathini esizayo, i-EG8143A5 isiza amabhizinisi ukwakha izixazululo zokufinyelela konke ezisetshenziselwe amakhampasi wesizukulwane esilandelayo.
I-Huawei GPON ONT 1GE HG8010H
I-Huawei HG8010H FTTH optical network terminal (ONT) iyinethiwekhi yokugcina yangaphakathi yenethiwekhi ku-Huawei FTTx solution. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-GPON, ukufinyelela kwe-ultra-broadband kunikezwa abasebenzisi basekhaya nabaseSOHO. Isango lasekhaya lapho-ke lingaxhunywa kwi-PC, i-Mobile Terminal, i-STB, noma ifoni yeVidiyo ukuhlinzeka ngemininingwane esheshayo, izinsizakalo zevidiyo.
Le modeli isekela isikhombimsebenzisi esisodwa se-GE Ethernet futhi iqinisekisa ngempumelelo idatha ne-HD yesevisi yevidiyo ngokusebenzisa amandla okudlulisela phambili ekusebenzeni futhi futhi lokhu kunikeza amakhasimende isisombululo sokufinyelela se-all-optical kanye namakhono wokusekelwa kwensizakalo okuqondiswe esikhathini esizayo.
I-Huawei GPON ONT 4GE + 2POTS + WIFI HG8245H
I-Huawei HG8245H FTTH yenziwe futhi yathuthukiswa yinkampani yeHuawei, engumholi ku-FTTH / FTTO broadband access network field. Le modeli ilawulwa kahle ngokungezwe ngezici ezinjenge-bandwidth ephezulu, ukuthembeka okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi futhi yanelisa abasebenzisi abadingekayo ukufinyelela ku-broadband, izwi, idatha nevidiyo njll. Izinsizakalo zevidiyo zeVoIP, Inthanethi ne-HD. Ngakho-ke, i-HG8245H inikezela ngesixazululo esiphelele se-terminal kanye namasevisi asekelwa esikhathini esizayo asekela amakhono wokuthunyelwa kwe-FTTH.
I-Huawei HG8245H FTTH inikeza amachweba we-4GE + port * yocingo engu-2 * ne-wifi enezimpondo ezi-2 zokuzuza okuphezulu kokusebenza okungenantambo.
I-Huawei GPON ONT 1GE HG8310M
I-Huawei HG8310M FTTH optical network terminal (ONT) iyinethiwekhi yokugcina yangaphakathi yenethiwekhi ku-Huawei FTTx solution. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-GPON, ukufinyelela kwe-ultra-broadband kunikezwa abasebenzisi basekhaya nabaseSOHO. Isango lasekhaya lapho-ke lingaxhunywa kwi-PC, i-Mobile Terminal, i-STB, noma ifoni yeVidiyo ukuhlinzeka ngemininingwane esheshayo, izinsizakalo zevidiyo.
IHuawei GPON ONT 4GE + 1POT + 1USB + Dual-Band WiFi HS8145V5
IHuawei HS8145V5 iyidivayisi yesango ehlakaniphile yezixazululo zasekhaya ze-gigabit fiber. Isicelo se-Flexible, ipulagi yokusekela nokudlala, ukuxilongwa okukude, ukonga amandla aluhlaza neminye imisebenzi. I-HS8145V5 isekela ubuchwepheshe be-GPON, obungathola ukufinyelela kwe-ultra-broadband kubasebenzisi basekhaya kuzimo zokuxhumana ze-FTTH. Umsebenzi wawo wokudlulisa ukusebenza okuphezulu uqinisekisa ngokusezingeni isipiliyoni sensizakalo yezwi, idatha nevidiyo enencazelo ephezulu, futhi inikezela ngezixazululo ezifanele zokugcina kanye nemisebenzi yokuxhasa ibhizinisi esekwe ikusasa ekusetshenzisweni kwe-FTTH.
I-Huawei GPON ONT 1GE + 3FE + Izimbiza + iWIFI HS8545M5
I-Huawei HS8545M5 FTTH iyindlela ephezulu yokungena ekhaya ku-FTTH solution. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-GPON, ukufinyelela kwe-ultra-broadband kunikezwa abasebenzisi basekhaya nabaseSOHO. I-Huawei HS8545M5 FTTH ifaka amandla wokudlulisela phambili wokusebenza ukuqinisekisa ubungcweti obuhle ngeVoIP, i-Intanethi kanye nezinsizakalo zevidiyo ze-HD. I-Huawei HS8545M5 FTTH inikeza isixazululo esiphelele sokugcina kanye nensizakalo esekele ikusasa esekela amakhono wokuthunyelwa kwe-FTTH.
IHuawei xPON ONT 4FE + 2POTS + WIFI HG8245C
I-EchoLife HG series Optical Network Terminals (ONTs) ngamadivayisi ohlangothini lwabasebenzisi kuzisombululo zeHuawei Fiber-To-The-House (FTTH) futhi zisekela ukufinyelela kwe-bandwidth kubasebenzisi basekhaya noma beHhovisi Elincane / leHhovisi Lasekhaya (i-SOHO) abasebenzisa ubuchwepheshe be-xPON.
Ama-ONT ochungechunge lwe-EchoLife HG ahlinzeka ngamachweba we-POTS namachweba we-FE / GE auto-negotiation Ethernet, avumela amandla wokudlulisela phambili wokusebenza. Thuthukisa izinsizakalo zokufakazela ikusasa nge-Huawei EchoLife HG series ONTs, equkethe izigaba ezintathu eziyinhloko: uhlobo lokuvala, ibhuloho + uhlobo lwezwi, nohlobo lomasango.
I-Huawei GPON ONT 1GE + 3FE + Izimbiza + WIFI EG8141A5
I-EchoLife EG8141A5 inikeza i-port eyodwa ye-GE, imbiza eyodwa ye-POTS, amachweba amathathu we-FE futhi isekela i-2.4G Wi-Fi. I-ONT ifaka amandla okudlulisa ukusebenza okuphezulu ukuqinisekisa okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu ngeVoIP, Inthanethi, kanye nezinsizakalo zevidiyo ze-HD. Lezi zici zenza i-EG8141A5 ibe inketho ephelele yokufinyelela kwe-broadband.
I-Huawei GPON ONT 4GE + POTS + i-dual band WIFI EG8145V5
I-EchoLife EG8145V5 i-Optical Network Terminal (ONT) ehlakaniphile ku-Huawei FTTH solution. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-GPON, ukufinyelela kwe-ultra-broadband kunikezwa abasebenzisi basekhaya. I-EG8145V5 isekela amabhendi ama-frequency amabili we-802.11ac futhi inamakhono wokudlulisa ukusebenza okuphezulu ukuqinisekisa isipiliyoni esihle kakhulu ngezinsizakalo zevidiyo, ze-Intanethi neze-HD. Lezi zici zenza i-EG8145V5 ibe inketho ephelele yokufinyelela kwe-broadband.
I-Sfp C ++, Optical Fibre Module, Transmitter Wangaphandle Transmitter, I-Xfp Transceiver, Intengo ye-Huawei Olt, IHuawei Qsfp +,